i-SA U19 ibuye kahle nge-bonus-point, nokunqoba nge-Duckworth-Lewis
I-Coca-Cola South Africa U19 ibuye kahle emuva kokuthi ihlulwe i-England ngama-runs angu-112 izolo ebusuku ngokuthi inqobe ngama-runs angu-62 nge-Duckworth-Lewis bedlala ne-Namibia e-Puk Oval e-Potchefstroom ngoMsombuluko. Ukunqoba kusho ukuthi iqembu lasekhaya lizobhekana ne-England kwi-final ye-Cricket South Africa Youth One-Day International Triangular Series ngeSonto, 10 December.
i-Man of the Match kube umdlali we-Namibia u-Gerard Lottering (83*) othole ama-runs amaningi kwizivakashi, ubasizile ukuthi bafinyelele ku-184/9 ekuoheleni kwama-overs abo emuva kokuthi kuthiwe abashaye kuqala. Ama-runs akhe angu-83 uwathole emabholeni angu-75 okubalwa khona o-four abahlanu no-six owodwa, kanti abanye bakhishwe u-Hermann Rolfes (4/16) no-Thando Ntini (3/27), abadlale kahle. u-Jason Niemand naye udlale indima, wathola u-2/23 futhi wenze isiqiniseko sokuthi abadlali abaningi abawudlulanga u-22 ka-Petrus Burger.
Ayiqala kahle i-South Africa ngasekushayeni njengoba odlale umdlalo wakhe wokuqala u-Jacob Miltz, ephume kwi-over yesithathu enama-runs amathathu. Avule naye, u-Jiveshen Pillay (32 off 30 balls, 4x4s, 1x6) wenza kahle ukwakha i-innings nokapteni u-Raynard van Tonder, behlanganisa i-partnership yama-runs angu-65 nge-wicket yesithathu ngaphambi kokuthi akhishwe u-Mauritius Ngupita (1/33) ekupheleni kwe-over yesi-14.
u-Van Tonder udlalise okwakapteni, wangaphuma nama-runs angu-59 emabholeni angu-69, okubalwa khona i-partnership yama-runs angu-58 nomdlali wesihlanu oshayayo, u-Wandile Makwetu (30* off 35 balls, 3x4s). Babukeke bedlala kahle futhi bezokwenza okukhulu kodwa bamiswa ukuphazima kwezulu, okuphinde kwalandelwa enye imvula emise umdlalo.
Iqembu lasekhaya lizophumula izinsuku ezimbili phakathi kwemidlalo ukuze liphumule njengoba lidlale imidlalo elandelanayo futhi lizobhekana ne-England kumdlalo wokugcina ngaphambi kwe-final ngeSonto. Womabili amaqembu anamaphuzu angu-10, kodwa i-England ingaphambili nge-net run rate engcono.
Ama-SA U19 alungele ukukhuphula izinga kumdlalo wokuqala we-day/night Youth ODI ekhaya u-Coetzee no-Molefe bahlelela i-SA u19 ukunqoba nge-bonus-point u-Van Tonder ufuna ukucacisa kumdlalo wokuqala we-Youth Tri-Series Molefe uthatha ama-wicket amahlanu kumdlalo wesibili oqedwe imvula u-Van Noordwyk uthatha okuhle emdlalweni wokuzilungiselela omiswe imvula i-CSA imemezela iqembu lama-U19 le-triangular series ne-England ne-Namibia Ukuhlulwa i-West Indies kwi-U19 series kumlimazile u-Mahatlane u-Breetzke ushaya ikhulu kodwa i-West Indies inqoba i-U19 series i-South Africa Under-19 ibheka ukushaya okufanayo West Indies ilinganise i-series ePietermaritzburg uMahatlane: Okuhle kudlula okubi